အောက်လမ်း ပညာဖြင့် ပြုစားခံ ရသော မိန်းကလေး အား (၁၀)တန်း ကျောင်းသားလေးမှ ကုသပေးနေပုံ လူကြည့်များနေ(ရုပ်သံ) – Zartiman
အထက်လမ်းပညာ ၊ အောက်လမ်းပညာ ၊ ခုလပ်ပညာ ဆိုသည်မှာ…ဘုရားအစရှိသော သူတော်ကောင်း များ သာသနာစောင့်နတ် /ပုဂ္ဂိုလ် များရဲ့ အဆုံးမကို နာခံ၍ အစောင့်ရှောက်ကိုခံ ယူ၍ မြင့်မြတ်သော အသုံးအဆောင်များနဲ့ စီမံသည်များကို အထက်လမ်းပညာ ဟု ခေါ်ပါ သည်။
သရဲတစေ စုန်းကဝေ ဖုတ် ပြိတ္တာ နာနာဘာဝများရဲ့ အကူညီကိုတောင်းခံယူကာ ယုတ်ညံ့နိမ့်ကျသော အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် စီမံ ပေးသည်များကို အောက်လမ်းပညာဟု ခေါ်ပါသည်။ ခုလပ်ပညာမှာကား နတ်စိမ်းများ ရုက္ခစိုးများ မယ်တော်များရဲ့ အကာကွယ်/အကူ အညီနှင့် အစောင့်ရှောက်ခံယူကာ တခါတရံ ဂါထာဖြင့်သော်လည်းကောင်း ချုပ်၍ အထက်တမျိုးအောက်တမျိုး လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို
အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ အသုံးကာဖြင့် စီမံပြုလုပ်ပေးသည် များကို ခုလပ်ပညာဟု ခေါ်ပါသည်။ လူကြည့်များနေတဲ့ အောက်လမ်း ပညာ ဖြင့် ပြုစားခံ ရသော မိန်းကလေး အား ကုသပေးနေတဲ့ (၁၀)တန်း ကျောင်းသားလေး (ရုပ်သံ)ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေး ထားပါ သည်….။
မန္တလေးက ကျွန်တော်ရဲ့ မြေးတပည့် (၁၀)တန်းကျောင်း သားလေး ကုသထားတဲ့ ဆရာတိုက်အောက်လမ်းစွဲကု ပွဲလေးပါ ။အသက်သာ ငယ်တာ ကြိုးစားတဲ့ကလေး။ ကျွန်တော်၏မြေးဆရာ အကာ ၏ တစ်ပည့် ဆရာ အောင်ကောင်းစံရဲ့ ကုပွဲလေး ပညာသင်လေးမလို့ လိုအပ် တာများ ရှိပါသေးသည်..ဖြည့်စွက့် ကြည့်ပေးပါ….
crd : ALZ
အောကျလမျး ပညာဖွငျ့ ပွုစားခံ ရသော မိနျးကလေး အား (၁၀)တနျး ကြောငျးသားလေးမှ ကုသပေးနပေုံ လူကွညျ့မြားနေ(ရုပျသံ)
အထကျလမျးပညာ ၊ အောကျလမျးပညာ ၊ ခုလပျပညာ ဆိုသညျမှာ…ဘုရားအစရှိသော သူတျောကောငျး မြား သာသနာစောငျ့နတျ /ပုဂ်ဂိုလျ မြားရဲ့ အဆုံးမကို နာခံ၍ အစောငျ့ရှောကျကိုခံ ယူ၍ မွငျ့မွတျသော အသုံးအဆောငျမြားနဲ့ စီမံသညျမြားကို အထကျလမျးပညာ ဟု ချေါပါ သညျ။
သရဲတစေ စုနျးကဝေ ဖုတျ ပွိတ်တာ နာနာဘာဝမြားရဲ့ အကူညီကိုတောငျးခံယူကာ ယုတျညံ့နိမျ့ကသြော အသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးမြားနှငျ့ စီမံ ပေးသညျမြားကို အောကျလမျးပညာဟု ချေါပါသညျ။ ခုလပျပညာမှာကား နတျစိမျးမြား ရုက်ခစိုးမြား မယျတျောမြားရဲ့ အကာကှယျ/အကူ အညီနှငျ့ အစောငျ့ရှောကျခံယူကာ တခါတရံ ဂါထာဖွငျ့သျောလညျးကောငျး ခြုပျ၍ အထကျတမြိုးအောကျတမြိုး လိုအပျရငျ လိုအပျသလို
အသုံးဆောငျပစ်စညျးမြား အသုံးကာဖွငျ့ စီမံပွုလုပျပေးသညျ မြားကို ခုလပျပညာဟု ချေါပါသညျ။ လူကွညျ့မြားနတေဲ့ အောကျလမျး ပညာ ဖွငျ့ ပွုစားခံ ရသော မိနျးကလေး အား ကုသပေးနတေဲ့ (၁၀)တနျး ကြောငျးသားလေး (ရုပျသံ)ကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွပေး ထားပါ သညျ….။
မန်တလေးက ကြှနျတျောရဲ့ မွေးတပညျ့ (၁၀)တနျးကြောငျး သားလေး ကုသထားတဲ့ ဆရာတိုကျအောကျလမျးစှဲကု ပှဲလေးပါ ။အသကျသာ ငယျတာ ကွိုးစားတဲ့ကလေး။ ကြှနျတျော၏မွေးဆရာ အကာ ၏ တဈပညျ့ ဆရာ အောငျကောငျးစံရဲ့ ကုပှဲလေး ပညာသငျလေးမလို့ လိုအပျ တာမြား ရှိပါသေးသညျ..ဖွညျ့စှကျ့ ကွညျ့ပေးပါ….
COVID -19လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ မဲပေးသည့်အစီအစဉ် လက်တွေ့သရုပ်ပြသခြင်းကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး